ကန်ပက်လက်မြို့နယ်တွင်း ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအချိန်မှီမပြီးစီးမှုမှာ တင်ဒါခေါ်ယူမှုကြာမြင့်ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုများနေခြင်းကြောင့်ဟု ကိုယ်စားလှယ်ထောက်ပြ - Chin World
Copyright © 2020 Chin World Media. All Rights Reserved. Webmaster - Salai Zing Bawi
ပလကျဝမွို့ကို တပျမတျောလုံခွုံရေးယူပွီး ဆနျအိတျပေါငျး ၁၇၀၀ ပို့ဆောငျပေးနပွေီ
ဆမီးမွို့မှပလကျဝမွို့သို့ စားနပျရိက်ခာမြား ယခုရကျပိုငျးအတှငျး ပို့မညျဟုသိရ
လမျး၊တံတား၊ကြောငျးမြှဖွငျ့ ခငျြးပွညျသူမြားကိုမဲမဆှယျပါနှငျ့ (ခငျြးဝေါလျအယျဒီတာ့အာဘျော)
အယ်ဒီတာမှ တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြည်သူလူထုထံသို့် (အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ)
ခငျြးပွညျနယျရဲ့တကယျ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုကို ဘယျလို ဦးတညျမလဲ
“၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ခငျြးလူထုမှ အထူးစဉျးစားသငျ့သော ကိုယျစားလှယျလောငျး (၃) ဦး” (U Soe Htet)
စတေနာအမှားတဲ့လား ညီမလေးMai Sui Hlei Tial ရေ
တခြိနျက ဗမာပွညျကှနျမွူနဈပါတီ (ဗကပ) နှငျ့ ဦးနု၏ ပါလီမနျဒီမိုကရစေီပါတီတို့၏ ခငျြးနှငျ့ တိုငျးရငျးသားမြားအပျေါ အမွငျသဘောထား
တိုငျးရငျးသားပါတီတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍ ဘာကွောငျ့ အရေးကွီးလဲ
Mai Sui Hlei Tial ၏ကှာလာလမျပူမှထနျတလနျနောကျဆုံးခရီး
အလေးထား လုပျဆောငျရမယျ့ တဈကြော့ပွနျကိုဗဈ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး
Chin World TV
ချင်းတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ခြေဥပြင်ဆင်မှုအပေါ်အမြင်
Sat, Dec52020
Home Chin ကန်ပက်လက်မြို့နယ်တွင်း ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအချိန်မှီမပြီးစီးမှုမှာ တင်ဒါခေါ်ယူမှုကြာမြင့်ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုများနေခြင်းကြောင့်ဟု ကိုယ်စားလှယ်ထောက်ပြ
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်တွင်း ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအချိန်မှီမပြီးစီးမှုမှာ တင်ဒါခေါ်ယူမှုကြာမြင့်ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုများနေခြင်းကြောင့်ဟု ကိုယ်စားလှယ်ထောက်ပြ
Chin World Media
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်တွင် တည်ဆောက်နေသည့် လုပ်ငန်းများ အချိန်မှီမပြီးနိုင်ခြင်းနှင့် အရည်အ သွေး မပြည့်မီနိုင်ခြင်းမှာ တင်တာခေါ်ယူစိစစ်ချိန် ကြာမြှင့်လွန်းပြီး အဂတိလိုက်စားမှု များနေခြင်း ကြောင့်ဟု ကန်ပက်လက် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွန့်ဝင်းက ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွန့်ဝင်းက “တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ အချိန်မှီမပြီးစီးမှုတွေ အရည်အသွေးမပြည့်မှီတာတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေမှာ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်တဲ့ကာလ နောက်ကျခြင်းဟာ အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်ဖို့ တင်တာခေါ်ယူ စိစစ်တဲ့လုပ်ငန်းကို သုံးလအတွင်း ပြီးနိုင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တင်ဒါကာလ ကြာလေလေ အဂတိလိုက်စားမှု ပိုများလေလေဆိုတာတော့ သတိမူဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်”ဟုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်မှီမပြီးနိုင်ခြင်းနင့် အရည်အသွေးမပြီးစီး နိုင်ခြင်းများမှာ ဝန်ကြီးဌာနအချို့မှ တင်တာလုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်ပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ဝန်ကြီးဌာနအချို့မှ လိုက်နာခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် ဟုလည်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
သူကဆက်ပြီး “လက်ရှိအခြေနေမှာ တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာ ဝန်ကြီးဌာနအချို့က ၁/၂၀၁၇ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားတဲ့ တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိတာတွေကို တွေ့နေရသည်။ ၁/၂၀၁၇ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားတဲ့ တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို မလိုက်နာရင်လည်း ရလားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ”ဟုပြောသည်။
လက်ရှိကန်ပက်လက်မြို့နယ်တွင် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ (၆၂၅)သန်းဖြင့် တည်ဆောက်နေသော နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတံတားမှာလည်း ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးသော်လည်း ပြီးစီးနိုင်ရန်မှာပင် မသေချာကြောင်းနှင့် ကန်ပက်လက် ကုတင်ငါးဆယ်ဆန့် လူနာဆောင်နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများမှာလည်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်သေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်လင်းက “ မုန်းချောင်းကူးတံတားကို ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ရန်ပုံငွေ လျာထားတင်ပြထားပြီး ရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မှေးချောင်းကူးတံတားကို ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်နောက်ပိုင်း ကာလများတွင် ရန်ပုံငွေ ထည့်သွင်းလျာထားတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာစိုးမိုးသူ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးနိုင်ရေး တိုက်တွန်းသည့် အဆိုကို ထောက်ခံဆွေးနွေးရာတွင် ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကနျပကျလကျမွို့နယျတှငျး ဆောငျရှကျသညျ့ လုပျငနျးအခြိနျမှီမပွီးစီးမှုမှာ တငျဒါချေါယူမှုကွာမွငျ့ပွီး အဂတိလိုကျစားမှုမြားနခွေငျးကွောငျ့ဟု ကိုယျစားလှယျထောကျပွ
ကနျပကျလကျမွို့နယျတှငျ တညျဆောကျနသေညျ့ လုပျငနျးမြား အခြိနျမှီမပွီးနိုငျခွငျးနှငျ့ အရညျအ သှေး မပွညျ့မီနိုငျခွငျးမှာ တငျတာချေါယူစိစဈခြိနျ ကွာမွှငျ့လှနျးပွီး အဂတိလိုကျစားမှု မြားနခွေငျး ကွောငျ့ဟု ကနျပကျလကျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးညှနျ့ဝငျးက ဒုတိယအကွိမျ ပွညျသူ့လှတျတျော (၁၃) ကွိမျမွောကျ ပုံမှနျအစညျးအဝေးတှငျ တငျပွဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
ကနျပကျလကျမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးညှနျ့ဝငျးက “တညျဆောကျရေး လုပျငနျးတှေ ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးတှေ အခြိနျမှီမပွီးစီးမှုတှေ အရညျအသှေးမပွညျ့မှီတာတှရေဲ့ အကွောငျးရငျးတှမှော တငျဒါစိစဈရှေးခယျြတဲ့ကာလ နောကျကခြွငျးဟာ အဓိကအခကျြဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုပွဿနာတှမေဖွဈဖို့ တငျတာချေါယူ စိစဈတဲ့လုပျငနျးကို သုံးလအတှငျး ပွီးနိုငျဖို့လိုအပျတာဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး တငျဒါကာလ ကွာလလေေ အဂတိလိုကျစားမှု ပိုမြားလလေဆေိုတာတော့ သတိမူဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ”ဟုလှတျတျောအစညျးအဝေးတှငျ တငျပွဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးနှငျ့ တညျဆောကျရေးလုပျငနျးမြားတှငျ အခြိနျမှီမပွီးနိုငျခွငျးနငျ့ အရညျအသှေးမပွီးစီး နိုငျခွငျးမြားမှာ ဝနျကွီးဌာနအခြို့မှ တငျတာလုပျငနျးနှငျ့ ပကျသကျပွီး လုပျထုံးလုပျနညျးကို ဝနျကွီးဌာနအခြို့မှ လိုကျနာခွငျးမရှိခွငျးကွောငျ့ ဟုလညျး တငျပွဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
သူကဆကျပွီး “လကျရှိအခွနေမှော တခွားပွညျနယျနဲ့တိုငျးတှမှော ဝနျကွီးဌာနအခြို့က ၁/၂၀၁၇ သမ်မတရုံး ညှနျကွားတဲ့ တငျဒါလုပျထုံးလုပျနညျးတှကေို လိုကျနာဆောငျရှကျမှုတှမေရှိတာတှကေို တှနေ့ရေသညျ။ ၁/၂၀၁၇ သမ်မတရုံး ညှနျကွားတဲ့ တငျဒါလုပျထုံးလုပျနညျးတှကေို မလိုကျနာရငျလညျး ရလားလို့ မေးခှနျးထုတျစရာပါ”ဟုပွောသညျ။
လကျရှိကနျပကျလကျမွို့နယျတှငျ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ်ဍာရေးနှဈအတှငျး ခှငျ့ပွုရနျပုံငှေ (၆၂၅)သနျးဖွငျ့ တညျဆောကျနသေော နယျစပျဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးတံတားမှာလညျး ဘဏ်ဍာရေးနှဈ ကုနျဆုံးသျောလညျး ပွီးစီးနိုငျရနျမှာပငျ မသခြောကွောငျးနှငျ့ ကနျပကျလကျ ကုတငျငါးဆယျဆနျ့ လူနာဆောငျနှငျ့ ဝနျထမျးအိမျယာမြားမှာလညျး အကောငျအထညျ ဖျောဆောငျရှကျနိုငျသေးခွငျးမရှိသေးကွောငျးလညျး သိရှိရသညျ။
ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးကြျောလငျးက “ မုနျးခြောငျးကူးတံတားကို ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘဏ်ဍာနှဈရနျပုံငှေ လြာထားတငျပွထားပွီး ရနျပုံငှရေရှိမှုအပျေါမူတညျ၍ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ မှေးခြောငျးကူးတံတားကို ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ်ဍာနှဈနောကျပိုငျး ကာလမြားတှငျ ရနျပုံငှေ ထညျ့သှငျးလြာထားတငျပွသှားမညျဖွဈကွောငျး” ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့သညျ။
အဆိုပါကိစ်စရပျနှငျ့ပတျသကျပွီး ဒေါကျတာစိုးမိုးသူ၏ ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြား သတျမှတျသညျ့ ဘဏ်ဍာရေးနှဈအတှငျး စံခြိနျစံညှနျးနှငျ့အညီ ဆောငျရှကျပွီးစီးနိုငျရေး တိုကျတှနျးသညျ့ အဆိုကို ထောကျခံဆှေးနှေးရာတှငျ ထညျ့သှငျးဆှေးနှေးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
Next post ဟားခါးမြို့တွင် ထားမည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တုအတွက် နေရာမရှိသေး
တရုတျနိုငျငံတှငျ ဖွဈပျေါနသေညျ့ corona virus ကွောငျ့သောငျတငျနသေညျ့ မွနျမာကြောငျးသား/သူမြား ပွနျနိုငျရနျ စီစဉျလကျြရှိဟုဆို
အရည်သွေးစမ်းသပ်မှုများအောင်မြင်သဖြင့် ဘုံဇုံးဘိလပ်မြေစက်ရုံယခုနှစ် ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်မည်
တီးတိနျမွို့ဆေးရုံရှိ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူ နှဈဦး ဆေးစဈခကျြ ၂ ခါတှငျ ရောဂါမပွသညျ့အတှကျယနဆေ့ေးရုံမှဆငျးမညျ
ကင်းတလင်းရွာသားများကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
အစိုးရသကျတမျးအတှငျး ဘတျဂတျြခှဲဝမှေုပိုငျးတှငျ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရနဖွေငျ့ အားမရဟုဆို
မောင်နှမကျေးရွာတွင် မပေါက်ကွဲသေးသည့် အမြောက်ဆံကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ စိုးရိမ်
တိုက်ပွဲများကြောင့် ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း ဆန်သယ်ယူခွင့် ပိတ်ထားပြီး ဆန်ဈေးအဆမတန်ကြီးခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
ဆမီးမွို့ဖကျသို့ စဈဘေးရှောငျလာသူ ၂ ထောငျကြျော ငှကျပြောဖူးနှငျ့ အစာရောစားနရေ
Chinland FC အသငျးဥက်ကဌ Saya TT (Thawng Tha Thang) နှငျ့တှဆေုံ့မေးမွနျးခွငျး
ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ(CNLD)ပါတီဥက်ကဌ Pu Ngai Sak နှငျ့တှဆေုံ့မေးမွနျးခွငျး